May Nyane: မြေနဲ့အတူ(ဇာတ်သိမ်း)
ချာမကလည်း ဘာလဲဗျ။ တကယ့်တကယ်က အဲလိုဇာတ်သိမ်းမှ မဟုတ်တာကို။ နောက်ဆက်တွဲတွေ ရှိသေးတယ်လေ။ အခုဆက်ရေး ဒါပဲ။ ဟီဟိ။
ဆရာမရယ်... ကောင်းလိုက်တဲ့ ဝတ္ထုလေးပဲ.....
မတူညီတဲ့ ဘဝနှစ်ခု...အခြေအနေနှစ်ခုကို ညှိယူဖို့ဆိုတာ လွယ်သလိုလိုနဲ့ အတော်ခက်ခဲတယ်..... အထူးသဖြင့် အတွေးအခေါ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ မတူညီမှုက ပိုဆိုးပါတယ်.... ဆရာမ ရေးသမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးပဲ.....
ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ သိပ်မသိတော့ မြေနဲ့အတူကို ဒီလိုဘဲ ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖတ်ခဲ့ ကြိုက်ခဲ့တာ..။ ခုတော့ နဲနဲ သိလာပြီ ဆိုတော့ ပွဲထဲက လူပျက်တွေ ပျက်သလို
ဟာ... ဟာ... ဟုတ်လဲ ဟုတ်ပဲနဲ့ ...
ဟာ... ဟာ... ဟုတ်လဲ ဟုတ်ပဲနဲ့ ... လို့ ပြောမှာနော်..။
comment တွေထဲမှာ ရေးထားတဲ့ တကယ့်ဇာတ်သိမ်းကို သိချင်လိုက်တာနော်...
ဒေါ်ပန်... သက်ဝေ...တကယ်ပဲ စိတ်ကုးယဉ်ဇာတ်ပါတော်..။
etm ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားပေးတဲ့အတွက်..
ရွာသားလေးရေ.. ဟုတ်ပါတယ်..။ ဘ၀ဆိုတာ.. မထင်တာတွေဖြစ်တတ်..။
သိင်္ဂါရရေ..အဲလို တဘက်စွန်းရောက်တာတွေကြောင့်ပဲ ခက်ကုန်ကြတာထင်ပါရဲ့။ တကယ့်ဘ၀မှာ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ.. ကျမလည်း မပြောတတ်ပါဘူး..။ သိပ်ချစ်ရင်တော့ ညှိကြမယ်ထင်ပါရဲ့။
မ ရေ မိန်းမနဲ့ ယောင်္ကျားရဲ့ အချစ်ပေါ်ခံယူပုံခြင်း ကွာခြားမှုက မြစ်ဖျားခံတဲ့ ပဋိပက္ခများလား… အသေးစိတ်ခံစားတတ်သူ ကျွန်မတို့ အတွက် နာကျင်စရာတွေပေါ့နော်… တကယ့်ဇာတ်သိမ်းက မောင်က မြေထက်မက မေ့ကို ချစ်တာပေါ့… ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
အင်းး မတန်ခူးရေ.. တကယ်ပါပဲ..။ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် ချဉ်းကပ်ပုံမတူတာ..၊ နောက်ပြီးတော့ နောက်ခံရေမြေမတူတာ..။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အချစ်မရှိရင် မဖြစ်ဆိုတာကို ဒီကိုယ်တော်လေး သိသွားပုံရပါတယ်..။ ဒါက တကယ့်ဇာတ်သိမ်း... :P
အမ .. အဲလိုပုံစံဖြစ်လာတိုင်း အဲလို ဇာတ်သိမ်းပဲ ဖြစ်တော့မယ်လားလို့ စဉ်းစားစရာပါပဲ ... ။
အစ်မရေ ဒီဝတ္ထုလေး ပြန်ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ်။ အရင်က ဖတ်ခဲ့ဘူးပြီး ကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့ ခုဖတ်ရတာ ပိုပြီး ခံစားရပါတယ်။ ကော်မန့်ထဲမှာ အစ်မ ပြောသလိုပဲ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမဟာ အချစ်ကို နားလည်တတ်ပုံခြင်း၊ ချည်းကပ်ပုံခြင်းမတူဘူးဆိုတာ အမှန်ပဲနော်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အတ္တကို ကိုယ်စီလျှော့ပြီး မညှိနိုင်သမျှ ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ပြောပြော အချစ်က သပ်သပ် ဘ၀က သပ်သပ်စီပါပဲ။
တောနဲ့ မြို့တနေ့ မှာ အသွင်တူကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ခုမှပဲ..ဖတ်ရတော့တယ်.. ဆက်တိုက်ဖတ် လိုက် ရတော့..မောလည်း မော.. ရင်တွေ လည်း တုန် ( ခုန်တာထင်တယ်း) .
ပြောလိုက်မယ်- အမ ဟာ- တကယ့် အချစ် စာရေးဆရာမ ကြီး ပါပဲ ..တကယ်..။ အချစ် ကတော့ ဖြင့်-
ဆရာမရေ... အကုန်လုံးပြီးမှပဲ လာဖတ်ရတော့တယ်။ တကယ့်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလှလှလေးကို နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဆက်ရေးပေးပါလား။
Prosper & Peace said...
Thanks for the beautiful story. Very romantic and touching!